Xildhibaan Khaliif “Beladweyne waxaan u tagay in aysan dhimasho dambe sababin xiisadda gobalka” – Kalfadhi
June 12, 2019 Kalfadhi
Khaliif Muumin Tooxow oo katirsan Golaha Wakiilada Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan kadib markii ay korartay xiisadda ka jirta duleedka iyo gudaha magaalada taas oo u dhaxeysa Ciidamo kawada tirsan dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyo hubeysan.
Xildhibaan Khaliif Muumin ayaa sheegay qorshaha socdaalkiisa uu ku saleysan yahay sidii loo dhameyn lahaa dhibaatada ka soo cusboonaatay gobaka Hiiraan islamarkaana uu bilaabay kulamo uu la qaadanayo dhinacyada khilaafka u dhaxeeyo.
“Waxaan u imid Beladweyne sidii aan uga qeyb qaadan lahaa joojinta in qof dambe macno darro nooga dhiman iyo inaan xaliyo kala aragti duwanaanshiyaha” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Khilaaf Muumin Tooxow oo katirsan Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle.
Xildhibaan Khilaaf ayaa sheegay in ay jiraan dhinacyo kale oo katirsan Baarlamaanka, odayaasha iyo siyaasiinta Hirshabeelle oo door weyn ka qaadanaya in la qaboojiyo Jahwareer-ka siyaasadeed ee gobalka Hiiraan.
“Sama-doonayaal badan ayaa wada dadaalka xal u helidda xiisadda siyaasadeed ee Hirshabeelle waxaana ku kalsoonahay in ay dhamaan doonto” ayuu yiri Xildhibaan Khaliif Muumin Tooxow oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Khaliif Muumin Tooxow ayaa ugu baaqay Taliyaasha Ciidamada Qalabka ee ku sugan gobalka Hiiraan in ay xakameeyaan Ciidamada islamarkaana aad looga taxadiro talaabooyinka amni oo ay qaadayaan. “ waxaan ugu baaqayaa taliyaasha oo dhan in ay mas’uul ka noqdaan talaabo kasta oo ay ciidamada qaadaan, waa in la ilaaliyaa oo lala socdaa dhaq dhaqaaqa ciidamada” ayuu yiri Xildhibaan Khaliif Muumin Tooxow oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
Xildhibaanada laga soo doortay Hirshabeellee ee BFS, sidee u wajahayaan qalalaasaha ka taagan G/Hiiraan